#Story | Suvadin !
काठमाडाै‌, असार २९ - साउदी अरबमा बुखारी नामका इमानदार विद्वान् बस्थे । इमानदारीको उदाहरण दिनुप-यो भने सबैले उनैको नाम लिन्थे । एकपटक उनी समुद्री जहाजबाट लामो यात्रामा निस्किए । उनले यात्राको खर्चका लागि एक हजार रियाल पनि साथमा बोके । यात्राका क्रममा उनको चिनाजानी अन्य यात्रीसित पनि हुँदै गयो ।...
काठमाडाै‌, असार २६ - एउटा गाउँनजिकै घना जंगल थियो । त्यहाँ अनेक जनावर र चराचुरुंगी बस्थे । एउटा लाटोकोसेरो पनि परिवारसाथ त्यहीँ बस्थ्यो । जंगलका सबै पशुपक्षी उसको बोलीलाई अत्यन्त अशुभ मान्थे । त्यसैले, उसलाई कसैले पनि आफ्नो नजिक आउन दिँदैनथ्यो । उसले बोल्नासाथ सबैले उसलाई बेस्सरी गाली गर्थे र स...
Sb Saud 321 0
Sb Saud 1.5k 0
जीवन बदल्ने यी तीन कथाः जसले हार मान्न दिँदैन
काठमाडाैं, भदाै १६–जीवनमा सबैलाई कुनै न कुनै बेला उत्प्रेरित गर्ने कोही व्यक्ति या त केही विषय वस्तु चाहिन्छ। सफलताको कथा होस् या कुनै प्रेरक रोचक प्रसंग यसले जीवनलाई या त कुनै पनि समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिदिन सक्छ। त्यसैले यहाँ तीन छोटा कथा प्रस्तुत गरिएको छ। जसले जीवनमा हार मान्न दि...
अञ्जना केसी पल्लो घरकी रचना तीजको सपिङ भन्दै न्यूरोड हिँडिन्। छोराले मेरो सेतो पछ्यौरी तान्दै भन्यो 'आमा! रचना अान्टीसँगै बजार जाउँ न? हाम्लाई कपडा अनि तिम्लाई रातो साडी लिएर आउँ।' उ अबुझ छ, बच्चै हो। उसका पनि आफ्नै रहर छन्। ती धेरै रहरमध्ये एउटा रहर हो, मलाई रातो साडीमा सजिएको हेर्ने!...
Anjana KC 2.1k 63
Suvadin Desk 768 0
बिप्लव मरासिनी/ उँ पहिलो पटक काठमाडौं आएको थियो। उ, अर्थात आर्यन। सुदूरपश्चिमको दुर्गम पहाडी जिल्लाको एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएको आर्यनले आफ्नै देशको राजधानी सहर हेर्न र घुम्नका लागि बर्षौ प्रतिक्षा गर्नुपयो। एसएलसी परीक्षा दिएपछि मात्र काठमाडौं आउने संयोग जु¥यो, यसपटक। उसको गाउ...
Suvadin Desk 941 0
Santosh Raj Pandey 1.2k 7
सिर्जना बस्नेत नजन्मिदै सुरु हुने जिन्दगीको कथा। यो कथा प्रसव पीडा सहन नसेर छटपटाएकी आमाको हैन। यो कथा त प्रसव पीडा भोक गरी सन्तान धर्तीमा ल्याउन असफल आमाको कथा हो। गर्भमा रहेको छोरीले भर्गबाट छुट्टिन नपाउँदै उसको कथा सकियो। फूलमाया आज अस्पतालको बेडमा छिन्। उनलाई ज्वरो आएको छैन,...
Sirjana Basnet 1.1k 1
नयाँ वर्ष, पुरानो प्रेमी
हरेक दिन नयाँ र हरेक दिन पुराना छन् मेरा लागि। पुराना दिनको अनुभूति अनि नयाँ दिनको अनुमानमै धेरै वसन्त पार गरियो। कति दिन बिते, कति रात कयांै महिना हुँदै वर्ष पनि बितेको पत्तो भएन। समयसँगै त्यसबेलाका यादहरू पनि मेटिँदै गए। तर, कति यादहरू अझै पनि स्मृतिमा ताजा छन्। समयले पनि कहाँ कसरी मिलन र विछोड गर...
Sirjana Basnet 6.3k 17
अञ्जना केसी ‘सवि, तिमी तयार हौ है। हामी बाहिर जाँदैछौं,’ मेरो श्रीमान संयोगले टावेल समात्दै भन्यो। ‘किन र?’ ‘तिम्रो भिसा निस्किएछ। आज पैसा लिएर मेनपावर आउनु भनेको छ।’ मलाई कसैले घुचुकमै हानेजस्तो गाह्रो फिल भयो। मैले आँखाभरिको आश्चर्य र रिसलाई...
Anjana KC 9.6k 43
Bishwamitra Kuikel 7.9k 0
तपाईंको कोखलाई सलाम
बादल दुखेर होला निरन्तर आकाश रोइरहेको छ आज। रेखाको मनजस्तै। जीवन सुखी भए पो मन पनि खुसी हुँदो हो। जान्ने बुझ्ने भएदेखि आजसम्म कुनै खुसी र सुखको प्रहर थाहा पाएकी छैनन् उनले। भौतिक सुख भए पनि मानसिक दुःखले सधैं पिरोलिरह्यो उनलाई। उनी कसकी छोरी हुन्? उनकी आमा कस्ती थिन्? किन उनलाई कन्टेनरमा फालिन्?...
Mira Prasai 1.5k 0
कथा : आज किन किन आकाश रोइरहेको छ। मन पनि त्यति खुसी छैन। जीवन सुखी भए पो मन पनि खुसी हुँदो हो। बुझ्ने भएदेखि आजसम्ममा दिनमा कुनै त्यस्तो खुसी र सुखको प्रहर थाहा पाएकी छैनन् उनले। भौतिक सुख भए पनि मानसिक दुःखले सधैं पिरोलिरह्यो रेखालाई। कसकी छोरी हु म? किन मलाई फालिन् मेरी आमाले? के उनलाई मेरो...
Mira Prasai 2.6k 0
त्यो दिन उनि क्लासमा ढिला आइपुगिन्। म्यामले उनलाई बाहिर नै राख्नुभो। म भने उनलाई एकोहोरो कक्षा कोठा बाहिर हेरिरहेँ। मेरो बेन्चको छेऊमै एउटा झ्याल थियो। धेरैजसो समय बाहिर नै हेरिरहन्थेँ। पढाइमा कत्ति पनि मन लाग्दैनथ्यो। पढेर के नै गर्नु छ र भन्ने लाग्थ्यो। मलाई त प्रभासँग बोल्न र बस्न पाए पुग्थ्यो। आ...
Pawan Bhatta 686 0
अयोग्य लडाकूकी श्रीमती
अन्जना केसी ‘प्लीज रोक्नुस न?’ आफ्नै रफ्तारमा दौडिरहेकी मेरो ध्यान अनामनगर हनुमानथाननिर बाटोमा इसारा गरिरहेकी एउटी छोटो कदकी ‘स्मार्ट युवती’तर्फ मोडियो। म बानेश्वरदेखि न्युरोड हिँडेकी थिएँ। केही सामान खरिद गर्नु थियो। म एकदमै हतारमा थिएँ। प्रायःजसो म हतारमै हुन्छु।...
Suvadin Desk 2k 0
चुइयँ गर्दै जाली खापा उघ्रियो। पत्रिका पढ्दै गरेको मेजर सा’बले पुलुक्क हेरे। कप प्लेट लिएर भित्र छिर्दै थिइन् बुहारी। सुनिता हो उनको नाम। पत्रिकाबाट पुनः आँखा हटाउँदै हेरे। पातलो सुरुवाल र रातो टिसर्टमा थिइन् सुनिता। कपाल छोडेकी उनको केही कपाल आँखा छोप्ने प्रयास गर्दैथिए। कपाल कलर गरेर रातो बन...
Bishwamitra Kuikel 2.1k 0
Suvadin Desk 40.7k 0
पाँच हजारको सहिद
रामु ओली साँझ झमक्कै परिसकेको थियो। सेतुका तीन छोराहरू खरले छाएको झुपडीमा सेतुको प्रतीक्षा गर्दैथिए। भोकले रन्थनिएका उनीहरू घरिघरि आमा आउने बाटोमा अाँखा डुलाउँदै थिए। सुरज भने अलि परसम्म पुग्दै आमा आइरहेको छायाँ कतै देखिन्छ कि भन्दै हेर्दैथ्यो। ‘सुरज, भोक लाग्यो आमा आइनन्,...
दिनेशकुमार कोइराला घर थियो तर पनि म बेघर थिएँ। साथीहरू थिए तर सम्पर्कबाट टाढा थिएँ। बिचरा भन्नेहरूलाई पनि मैले वास्ता गरिनँ। खेद्नेहरू त छँदैथिए। करिब एक बजेको हुँदो हो। हातमा घडी थिएन। टक्क रोकिएको समय पनि के हेर्नु? रसिला आँखा परेली धिपधिपाउँदा घडीको सूई उल्टो घुमेको द...
उसले मेरा लागि लेखेको लेटर उसको इकोनोमिक्सको कापीभित्र खै कसले भेटेछ। बलजफ्ती उसलाई त्यो लेटर मलाई दिन लगाए। उसको लभ लेटर पाउना साथ मेरो मुटुको गति ठाउँमा थिएन। मुख रातो–पीरो भएको थियो। साथीहरू कुनै विजय उत्सवझैं रमाउदै थिए। तर, म भने भित्रभित्र डराएको थिएँ। मैले यो कुरा अनिशलाई पनि भनेको थ...
Pawan Bhatta 6k 0
Suvadin Desk 8.3k 0
सिर्जना बस्नेत स्कुलबाट फर्किंदा बाटोबाट सुनिने ठाउँदेखि नै मुखमा आमा...आमा... भन्दै घरमा पुगेकी हुन्थेँ। खाना खाएर जति नै मेरो पेट भरिए पनि आमाको जुठो भात एक गाँस मुखमा परेन भने मेरो पेट भोकै भएको जस्तो लाग्थ्यो। ‘मलाई छाडेर नजा है नानी,’ भन्दै गर्दा अन्ठानब्ब...
होस, बेहोस्, होस्
महेशकुमार वाग्ले कथा : अनुहारमा रातो अबिर, दुबै हातमा फूलका गुच्छा। गलाभरि फूलका माला। खादा पहिरेका हाकिम साहबलाई नयाँजीवनको शुभकामना। बधाई दिइसकेर उपस्थित हामी सबै उहाँको कुरा सुन्न उत्सुक भयौं। दिगम्बर देख्दै डरलाग्दा बटारिएका काला जुँघा पालेका, काला–निला लुगा लाएका, हातमा क...
Mahesh Kumar Wagley 5.6k 7